China ngokwezifiso lip isicwebezelisi yangasese ilebula bezinto lip isicwebezelisi vegan acwazimulayo lipgloss base ifektri kanye nabaphakeli | Ubuhle be-Iris
inkambiso ye-lip lip gloss ilebula elizimele lip gloss plumper vegan shimmer lipgloss base
I-lip gloss enomsoco ekugcineni okucwebezelayo. Ukuzizwa okungasindi, okunganamatheli. Izinyembezi zithambisa izindebe ngamavithamini kanye nebhotela le-Shea. Ukugqama okuluthayo, ukugqoka okunomsoco, ukuthinta okuphela kwendawo yonke, izindebe zakho.
Le gloss lip glumping glink ine-pearl luster ecwebezelayo, enemibala ecebile, efakwe kancane, ingenza izindebe zakho zibukeke zikhuluphele futhi zicwebezele, zenze izindebe ezikhazimulayo ezicwebezelayo, futhi zibe umbulali wephathi.
Ifomula iqukethe uVithamini no Shea bhotela, ingathambisa izindebe zakho, yenze izindebe zakho zibe nempilo, iparele licace futhi libe manzi, futhi zenze izindebe zakho zikhazimule.
Ukwakheka kwezindebe kubaluleke kakhulu kubantu besifazane, futhi imibala ehlukene yezindebe yehlukile kubantu. Ngakho-ke, imikhiqizo yethu ecwebezelayo yezindebe zomlomo ifaneleke kakhulu njengezipho zomndeni, abangane nezintombi. Le gloss lip glumping glink iyatholakala ngemibala ehlukahlukene, ngakho-ke ungakhetha i-lip gloss efanele yezingubo ezahlukahlukene nemicimbi.
Igama lento Ukucwebezela kwezindebe zomlomo
Umsebenzi Izindebe ezishubile
4.Ukuqhuma / Ukucwebezela
Langaphambilini wholesale lip isicwebezelisi i-OEM ngokwezifiso ilogo yakho yangasese ilebula le-lipgloss vegan glitter lip gloss
Olandelayo: Iphalethi yangokwezifiso ye-eyeshadow ilebula yangasese yezimonyo imikhiqizo yokwenza umthengisi iphalethi yomthengisi
inkazimulo ye-glitter lip gloss
ilebula langokwezifiso le-lip lip gloss
isisekelo se-lip gloss
I-lip gloss plumper
ilebula elizimele elicwebezelayo lip isicwebezelisi
ilebuli yangasese ecwazimulayo lip isicwebezelisi
i-vegan shimmer lipgloss
Lipgloss umthengisi ngokwezifiso lip isicwebezelisi ilebula yangasese ...
lip isicwebezelisi umthengisi ilebula yangasese lip plumper glos ...
Nude lip isicwebezelisi ilebula yangasese ngokwezifiso nqunu ecwebezelayo ...